My World: ဆယ့်နှစ်လရာသီ
Posted by PhyoPhyo at Monday, December 02, 2013 Labels: ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့, မေမေ့ရဲ့စာ
မဟာ ပိန်းနဲရယ်နဲ့ နတ်ပွဲ ..အလီလီ..
အော် .နတ်တော်လမှာတော့ ..ပျော်ကြ. ပါးကြသည်…..
ဘာလိုလိုနဲ့ နတ်တော်လကို ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။ဖြိုးဖြိုးရေ..။ နာရီလက်တံတွေက နှေးကွေးလိုက်တာ လို့ တခါတလေ အောက်မေ့မိပေမဲ့ တကယ်တော့ တဂျက် ဂျက် သူရွေ့ရှားနေပုံက မြန်ပါတယ်။ဟိုတလောကတင် လူ တွေ Happy New Year ဆိုပြီး သံကုန်အော် ကြိုခဲ့ကြတာ ဘာမှ မကြာသေးဘူး။ ခု သူတို့ပဲ နိုဝင်ဘာကို ရက်ရက်စက်စက် နှင်ထုတ်လို့ ပေါင်မုံ့တချပ် ၀ိုင် တခွက်နဲ့ ဒီဇင်ဘာကို ကြိုဆိုနေကြပြီလေ။ ပြီးရင် သူတို့ပဲ သွားတော့ ဒီဇင်ဘာရေလို့ နှင်ထုတ်ကြဦးမယ် နှစ်သစ် ဇန်န၀ါရီဆိုပြီး ကြိုဆိုကြဦးမယ်။ တတ်လည်း တတ်နိုင်တယ်။ ဟင်း…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေမေကတော့ နေ့လ နာရီတွေ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံး ပြောင်းလဲ နေတိုင်း မေမေ၀င်းရဲ့ သီချင်းကလေးကို ကြားယောင်နေတယ်။ ဗိုလ်အောင်ဒင် ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ မမြ၀င်း(မေမေ၀င်း) က သူ့ချစ်သူ ပုလိပ်အရာရှိ ဦးဘချစ်ကို တမ်းတပြီး ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ ခင်မောင်ရင် (ဗိုလ်အောင်ဒင်)ဟာ လူဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘဲ လမ်းစရိတ်ရှာရင်း မလွှဲမရှောင်သာ မမြ၀င်း ကို ပြန်ပေးဆွဲသွားရတာလေ။
သီချင်းလေးက တစ်လပြီးတစ်လ ရာသီပန်းတွေရော ကြယ်နက္ခတ်တွေရော ရာသီပွဲတွေရော ဖေါ်ပြထားတယ်။ သီချင်းရေးဆရာက ဂီတာသောင်း တဲ့။
အော်..တနေ့ တနေ့ ရယ်နဲ့ တရွေ့ရွေ့ အချိန်ကုန်ပြီ.. နှစ်လတာရှည်…ဘယ်အချိန်ကျကာမှ..မြနဲ့လေ…
ချစ်သူမောင်နဲ့ ပေါင်း..ရမယ်လို့ …မျှော်မှန်း ..ဆ .ကာပ တမ်း .တနေသည်….ဆယ့်နှစ်လ ရာ ..သီ…
မမြ၀င်းက သူ့ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ စေ့စပ်ထားပြီးပါ။ အင်စပက်တော်မင်းက အလုပ်မအားနိုင်လို့ ကြန့်ကြာနေခိုက် ..ဗိုလ်အောင်ဒင် ဖြစ်မဲ့သူ ခေါ်ဆောင်ရာနောက် ..လိုက်ပါသွားရတာကိုး။
တန်ခူးလ .သင်္ကြန်ခါမှီ ..ချစ်သူ သက်လှယ် ..မောင်လာမယ် ပြော …ပြော…၊ မျှော်ရသူ မြကလေးမှာတော့…စိတ်မအေးစရာ ..ကြုံ လာပြန်သည်..။ကဆုန်လ၀ယ် ..ညောင်ရေပွဲ..မောင်နဲ့ နွဲ ..ရပါမည်..။ နယုန် ..လကုန် ၀ါဆို အတွင်း…ပုန်းညက်ညို ..မာလာမင်းက ..သင်း..လှတဲ့ ….ဒီချိန်ခါမှာ…မောင်မလာ .ရှောင်ခွာပြေး..ဝေးရပါပြီ… အော် …လေးလရာသီ…ရှိပြီ မောင်ရဲ့ ..မေ့ကာ နေသလား…ရက်စက်လေ အား..သည်။
တစ်န့ တစ်နေ့ ရယ်နဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လာလိုက်တာ ..ဦးဘချစ်က ပေါ်မလာပါဘူး။ ရင်တမမနဲ့ သူ့မှာလည်း စိုးရိမ်ပူပန်နေရတာပါ။ မြမြဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိပါဘူး။ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဘယ်ရောက်နေမှန်း ..မသိနိုင်ပါဘူး။ မြမြ ဘာဖြစ်နေပြီလဲ သူ မသိ နိုင်တာတွေပါ။ စုံစမ်းနေဆဲပါ။ ဦးဘချစ်ရဲ့ အရည်အသွေးကို စိတ်ချယုံကြည်နေတဲ့ .မြမြခမြာ..တနေ့သော်လည်း ရောက်လာနိုး တနေ့သော်လည်း ရောက်လာနိုး သီချင်းကလေး ဆို ဆိုပြီး မျှော်နေရှာတာပါ။။
.ဗိုလ်အောင်ဒင် ရုပ်ရှင် ကို မေမေ ၁၁နှစ် ၁၂နှစ် သမီးလောက် ရှိအုံးမယ်။ အကိုကြီး မောင်ကြည်ရှင် ပြလို့ ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ မေမေ၀င်းက.အော်...တနေ့ တနေ့ ရယ်နဲ့ ..လို့ အစချီကာရှိသေး မေမေက မျက်ရည်တွေ ၀ိုင်းလာနေပြီ။ အဲဒလောက် မေမေ၀င်းက အဆိုပိုင်တာပါ။
မြမြက တော့ .ဘာ့ကြောင့် သူ့ကို ရှာမတွေ့တာလဲ မသိပါဘူး။ ချစ်သူက စိမ်းသွားလေပြီလား တွေးပူနေရှာတယ်။ တလပြီး တလ မျှော်နေရတာ လေးလ ရှိပါပြီ။တဲ့။
ရာသီ ချိန်ဝယ်.. နေမိန္ဒရ….၀ါခေါင် လမို့ ..တမ်းတကြာရှည်. ..ဤရာသီ..တော်သလင်း..မှာ
..အော် ..မျှော်ရင်း..ကျွန်မကတော့ ..လွမ်းရပါသည်..၊
ရက်လ ကြာလာသည်နဲ့အမျှ ဗိုလ်အောင်ဒင်ကလည်း မမြ၀င်းအပေါ် သနားစိတ်ဝင်ပြီး ချစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ သူက သစ္စာ ရှိတယ်ကွဲ့။ မမြ၀င်းဆီက အချစ်ကို ရိုးရိုးသားသား တောင်းခံတယ်။ လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိဘူး။ မမြ၀င်းကို သနားပေမဲ့ သူကလည်း ချစ်နေတော့ ပြန်မပို့ ချင်တာလည်းပါတယ်။
ဗိုလ်အောင်ဒင် ကားထဲမှာ ခင်မောင်ရင် ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်း လေးတွေ အရမ်းကောင်းတယ်။ သနားဖို့လည်းကောင်းတယ်။ဘာဂျာလေး ဆွဲပြီး ဆိုတဲ့ သီချင်းဆို မေမေက ခုထိ မြင်ယောင် ကြားယောင်ဆဲပေါ့။ ဆင်း…ရူပကာ ..မြင်ကတဲက ဘ၀င် ထဲမှာတော့ ကွယ်..ဆိုတဲ့သီချင်းပေါ့။ ရုပ်ကော အသံကော ချောတာရော ခန့်တာရော..ခင်မောင်ရင် ကို မှီတဲ့သူ ခုခေတ် ထိ မပေါ်သေးဘူး။(မေမေ့အထင်)
တဖြည်းဖြည်းနဲ့သာမန် တောသားလေး အောင်ဒင်ဟာ လူကုံထံ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာဝင်ဆန့်ပြီး နာမည်ရ ထင်ရှားလာတယ်။မြေပေါ်မှာတော့ သူက မရှိဆင်းရဲတွေကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့နေတဲ့ အလှူရှင် သူဌေးကြီးပေါ့။ နောက်ကွယ်မှာတော့ မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး ကုန်တိုက်တွေ ဘဏ်တိုက်တွေ ၀င်စီးတယ်။မတရား ချမ်းသာနေတဲ့ သူတွေထံက ငွေကို တရားသဖြင့် ရအောင် အလှူခံတယ် လုတယ်ပေါ့။ဗိုလ်အောင်ဒင်ဟေ့ ဆိုရင် ဖိန့်ဖိန့်တုန် ကြောက်ကြရတော့ ဘယ်သူမှ ကြာကြာ မဆိုင်းရဲဘူး။ထုတ်ပေးကြရတယ်။မျက်နှာဖုံးစွပ်နဲ့ဆိုတော့ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ရဲကတောင် မသိဘူး။
လျှပ်တပြက် အသွင် ပြောင်း လှုပ်ရှားတတ်သူ သွက်လက်ဖြတ်လတ်သူ ဆိုတော့ ရဲက လိုက်မမှီဘူးပေါ့။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှာဆိုတော့ wanted ထုတ် ရတဲ့ အထိပါပဲ။ ဆုတော်ငွေ ဘလောက် ပေးမည်ပေါ့။သတင်းစာတွေကနေ ကြော်ငြာတာ ဘယ်ဘဏ်တိုက်ကို ၀င်စီးတာ ဖြတ်ကနဲ ဖြတ်ကနဲပြသွားတာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ဒါရိုက်တာက ရွှေဒုံးဘီအောင်လားမသိဘူး။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်ရာသီက ရပ်မနေတော့ ရှစ်လ ရှိခဲ့ပါပြီ တဲ့။ မမြ၀င်းက..။
ဆီမီး ရောင်ရှိန် ..ထိန်ဝါလင်း…သီတင်းကျွတ်တော့ မည် သီတင်းကျွတ်တော့မည်..အော်..သီတင်း ကျွတ် တော့မည်..တန်ဆောင်မုန်း..မှာ..မောင်ဖုန်း ..မလာတော့ ..နှစ်လ တာရှည် ..ရှစ်လ ရာသီ..ရှိပြီ ..မောင်ရဲ့ …မေ့ကာ နေသလား ..ရက်စက်လေ အား..သည်။
ဗိုလ်အောင်ဒင် က လူလည်ကွဲ့ သူ့နောက် ဘသူမှ လိုက်မလာနိုင်အောင် တတောဝင် တတောထွက် တတောင်တက် တတောင်ဆင်း အမြဲ နေရာပြောင်းတယ်။ ဆင်တွေနဲ့ သွားရတယ်။
မဟာ ပိန်းနဲရယ်နဲ့ ..နတ်ပွဲ အလီလီ..အော်..နတ်တော်လမှာ..တော့ …ပျော်ကြ ..ပါးကြ သည်…ပြာသိုမှာ ..ခွာညိုသင်း..တယ် …မြူနှင်းတွေ…ဝေေ၀ စီစီ..မောင်..လာမယ်ဆိုတဲ့ ရက်ကို….မြကလေး…မျှော်ဆဲ….
နတ်တော်လမှာတော့ နတ်ပွဲ အလီလီ ဆိုသလို နတ်တွေ မြူးတဲ့ လပေါ့။ မေမေတို့ က ထေရ၀ါဒမို့ နတ်ပွဲတွေနဲ့ ကင်းပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀ှမ်းက လူတွေ လူတွေ ဆိုင်ရာ ဆိုငရ်ာနတ်ပွဲ တွေရှိရာ သွားကြ ပျော်ကြ ရေကြည်ဆက်ကြ ဘာဆက် ညာဆက်ကြပေါ့။ မသွားမဖြစ် သွားကြရတဲ့ သူတွေ ခုထိ ရှိတယ်။
တပိုတွဲ..ပေါက်လဲ ငယ် ..တဲ့ ထိန်ထိန်လျှံ…..ကျေးငှက်သံ တစာစာ နဲ့ …ထမနဲ ပွဲလဲ နွဲ ကြပြီ…
မိန်ရာသီ…လတပေါင်း..မှာ…..ရွက်ဟောင်း..ကြွေ လျက်…..မောင်မလာ ..ရှောင်ခွာ ထွက် တော့ ..ဆယ့်နှစ်လ ရာသီ..အော်…ဆယ့်နှစ်လ ရာသီ….ရှိပြီ မောင်ရဲ့ …မေ့ကာနေသလား…ရက်စက်လေအား…သည်..။
ကဲ ဖြိုးဖြိုးရေ..ခေတ်ဟောင်း မြန်မာ ကျေးလက် တေးသီချင်းတွေဟာ ဘယ်လောက် အဆီအနှစ် ပါသလဲ။ သုတ ရသ ဘယ်လောက် စုံလင် သလဲ။ ချစ်သူကို လွမ်းတာ ရိုးရိုးလွမ်းတယ်မပြောဘူး။ အဆီအနှစ်တွေ ရသ တွေ သုတတွေနဲ့ လွမ်းပြီးပြောတာ နော။ အသံသာတာရော။ ဒီသီချင်းမှာ မြန်မာဆန်တာရော သိမ်မွေ့တာရော ယဉ်ကျေးတာရော.မျိုးစုံ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒီသီချင်းကလေးတွေ မပျောက်ပျက် စေချင်ပါဘူး။ ရှေးမူမပျက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်တယ်လို့ မေမေကတော့ ထင်တာပဲ။